Yiziphi izinzuzo amasha umshini Chili stem cutting - China Lu Lu Isisetshenziswa sezolimo
Chili stem cutting umshini
Chili elikhulu stem cutting umshini
Chili okulingene stem cutting umshini
Chili Small stem cutting umshini
itshe Chili ekususeni umshini
Chili ahlabayo umshini
Chili ukucutshungulwa uchungechunge
Chili Color Ukuhlelwa Machine
Patent ngoba okusungulile
Yiziphi izinzuzo Chili entsha stem cutting umshini
Yiziphi izinzuzo entsha obabayo stem cutting umshini? Chili stem cutting umshini kuyingxenye esisemqoka yomkhiqizo wezolimo kwezinye izindawo. Kuyinto imfuneko ongenakugwenywa ukuthuthukiswa kwezolimo ukwakha ezinengqondo futhi esebenza kahle Chili stem cutting umshini. A ephelele Capsicum dispenser inezingxenye ezinhlanu: uhlelo ukusuthisa, ukulethwa uhlelo, uhlelo esivusa amadlingozi, futhi athula uhlelo.
Kuyini nethemba Chili stem ukusika umshini? Umbuzo akanayo iphendulwe ngokushesha. Ngenxa ekukhiqizeni langempela futhi ukuphila, akunzima ukuthola ukunakwa kancane bagcine. Eminyakeni yamuva, supply jikelele kanye buza of imikhiqizo Chili liye landa unyaka nonyaka ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje, kuphela ku Qingdao, kukhona emizaneni eminingi nemizana wahlanganyela nokukhiqizwa nokuqhutshwa imikhiqizo Chili ngezinga elikhulu. Ngenxa yalokho, inani labo abangase babe abathengi of Chili stem cutting umshini namanje amazing ngempela. Ngaphezu kwalokho, ezweni lonke, Hunan, Sichuan nezinye izifundazwe e china nazo abakhiqizi elikhulu Chili izifundazwe. Futhi ezinye zalezi zindawo, Umsebenzi imikhiqizo Chili namanje ku esiteji yokuqala handwork, ngakho uma kukhona umshini Chili ukubeka imishini Chili emakethe, nakanjani amukelwe ngenani elikhulu abangane ongumlimi. Futhi umkhiqizo ezifana ngokuqinisekile ukukusiza ukuba ngcono ukukhiqiza Chili.
Nge ukuthuthukiswa okuqhubekayo ubuchwepheshe, zonke izinhlobo imishini elula ekuphileni, baba nazo ekuqaleni ukuvela emakethe. Chili stem cutting umshini futhi omunye wabo. Indlela yokusingatha izinhlobo ezinjalo Chili? Isese kudingekile ongakhetha kuzo imisebenzi efana kanye nezimiso.
Ukwakheka kanye nokusebenza:
izici 1.Performance: lokhu okokusebenza ikakhulukazi esetshenziselwa nesasehlobo Chili yokugunda, imishini ukusika kahle eliphezulu, umonakalo Chili ongaphakeme lempumelelo okusezingeni eliphezulu, ukuzivumelanisa izinhlobo ezahlukene futhi Chili umumo (Udinga ukuba egcizelele), owodwa umshini kusebenta ingaphezu 5 izikhathi emakethe imikhiqizo abavamile, ukusebenza wonke umshini ifinyelele international level ehamba phambili. Lo mkhiqizo, kulekelelwa imishini elisizayo ezifana nokususa ukungcola kanye eveza, ungenza ukusebenza ngokuzenzekelayo wonke umshini badlala indima ebalulekile. Kuyinto imishini ebaluleke ukubhekisiswa inqwaba imikhiqizo yezolimo. Kungaba esikhundleni inqwaba Manpower, ugcine izindleko zomsebenzi, ngcono kakhulu nekusebenta yokusebenza.
2. Main isimiso ukusebenza: e inqubo ngesihlungo sigubhu elendlalekile, ngaphandle ahlabayo ummese kanye odongeni ngesihlungo isilinda ukukhiqiza umshini ukuze isibambo Chili okudlula ngesihlungo imbobo ingibe amandla, ukufeza injongo kokukhipha isibambo Chili.
isikhathi Iposi: Septhemba-10-2018
Ikheli: Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong, Jiaolai Industrial Park
Ucingo: +86 13361271555
Lapho senza ukusika Chili fresh, izandla zethu hhayi ...
Asho emakethe Chili ...
Yiziphi amaphuzu ukunakwa esikhathini ...
Yiziphi izinzuzo amasha Chili stem ...
Yiziphi izinzuzo obabayo stem cu ...